7 Best Saffarada Day From Venice | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 7 Best Saffarada Day From Venice
aad wada ogsoon Sida, Venice waa ugu magaalada gaara farxad oo dhan of Europe, haddii aanay dunidu. Talyaaniga ayaa waxaa sameeyey oo gebi ahaanba ka mid ah kanaalada iyo aayado yar, kuwaas oo dhammaantood ku seexanaysaa jasiirad. Tani ayaa magaalada ka mid tahay meelaha quruxda badan ee Europe ugu galay. Laakiin dhammaanteen innagoo aan ogahay in. Waxa eey dad badan ma oga waa xaqiiqada ah in ay jiraan dibadda badan oo Venice. That is why we wanted to prepare a list of some of the best day trips from Venice. Waxaad ma ceeboobi doono by mid ka mid ah dalal iyo meelaha. Sidaas, haddii aad xiiseynaya booqanaya qaar ka mid ah goobaha xiiso leh via tareenka, akhriska sii 7 Best Saffarada Day From Venice In Italy!
1. Mid ka mid ah Aad u Fiican Saffarada Day From Venice waa: Verona
Verona waa in mid ka mid ah magaalada sixir ah ee gobolka Veneto ah, Northern Italy qof walba ogyahay. Shakespeare ka dhigay weligeed ah markii uu go'aansaday inuu u isticmaal sida meesha uu caan Romeo iyo Juliet play. maanta, Magaalada waa mid aad loo jecel yahay, iyo waxa uu xaq u leeyahay kasta in uu noqdo.
Waxaad ka heli doontaa mid aad u Verona picturesque, waana mid ka mid ah meelaha ugu fiican waayo, maalintii oo safar ka Venice. Haddii aad rabto inuu halkaas tago tareen, waxaad ka heli doontaa inuu noqdo ah fiican iyo doorasho dhaqsaha badan marka socday ka Venice.
Kuwa Jecel Italy ogahay in Florence waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee booqashada. Sidoo kale waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican in ay soo booqdaan safar maalin buuxda ka Venice.
Dad badan ayaa ilaa halmaamay in ay ka gaari karin ka Venice maxaa yeelay, waa yara fog. Si kastaba ha ahaatee, aad gaari kartid Florence ka Venice in laba saacadood oo kaliya fuushan tareen-xawaaraha sare ah. Sidaas, waxa kale oo aad ka heli doonaan in ay arkaan dad badan oo ka mid ah Bbc cajiib ah kala firdheen oo dhan dhulka u dhexeeya Venice iyo Florence.
wax ugu weyn ee aad heli doonto in ay waayo-aragnimo ee Florence yihiin jidadka soo jiidasho iyo Florence Cathedral ama Duomo do Firenze. Marka aad u aragto in, Florence noqdo meel soo jiidasho leh ee dhammaan dadka safarka ah.
3. Mid ka mid ah Aad u Fiican Saffarada Day From Venice: Padua
Ma aha qof kasta waa og yahay oo ku saabsan Padua (Talyaani: Padova), laakiin weli waa meel mid ka mid ah safarada maalin top ka Venice. Saas waxaa ugu wacan magaalada ayaa wax walba ah magaalada weyn oo Talyaani baahan yahay in ay leeyihiin. Waxaan si dabiici ah hadalka ku saabsan cuntada weyn, naqshadaha cajiib ah, iyo piazzas yaab.
Going ka Venice in Padua waxaa sida ugu wanaagsan gaari via tareenka sida safarka maraa meelo qaar ka mid cajiib ah in Italy. Plus, waxa ay sidoo kale waa fursad ugu raaxo iyo ugu dhaqsiyaha badan aad heli karto.
Marka aad hesho si aad Padua, Hubi in aad booqato xarunta magaalada Prato della Valle. Waa mid ka mid ah fagaarayaasha waaweyn ee magaalada, oo waxaa ka buuxsamay Sidaana qurux mid is illowsiin kartaa.
Venice in Tareenadu Padua
Lake Garda waa gudubno ugu weyn ee Italy. Sidoo kale waa mid ka mid ah ugu caansan. Oo waxay leedahay sabab kasta in uu noqdo. gudubno, waxaa ku hareereysan nooca quruxda dhan ku siin karaan. Waxaad ka heli doontaa magnolias, Dhirta berooshka ah, geedaha liin, geed oo saytuunka ah, Dolomite buuraha iyo si ka badan agagaarka Lake Garda.
Waxaad gaari karo dhowr magaalo oo ku taal xeebaha badda ay ka Venice. Si kastaba ha ahaatee, Waxaan dareensannahay in laba ka mid ah safarada maalinlaha ah ee ugu wanaagsan Venice ilaa Lake Garda ay u baahan yihiin in lagu daro magaalooyinka Peschiera iyo Sirmione. Si aad u iyo Lake Garda gaaraan, waxaad qaadan kartaa mid ka mid ah dhowr tareenada in fasax Venice maalin kasta.
5. Mid ka mid ah Aad u Fiican Saffarada Day From Venice: Siena
Ma aha qof kasta waa og yahay oo ku saabsan Siena, laakiin ma aha waa magaalo aad rabto in daahid. Waa jawharad ee Tuscany oo ugu gaara u qurux badan magaalada Dr Makumbe Weligaa ma ka heli doonaa si ay u arkaan.
Magaalada waa yar yahay, laakiin waxa ay caan ku tahay in ay jidadka cobbled iyo square weyn ugu weyn ee loo yaqaan Piazza del Campo. Sidoo kale, ugu fiican Magnia Tower taagan on square in isla, waana qaabka ugu dheer waxaad arki doontaa in Siena.
The tareen kortaan waa yara dheer sidii magaalada fog yahay. Si kastaba ha ahaatee, tan iyo Siena yar yahay, weli waad heli kartaa safarka maalin la yaab leh ka Venice haddii aad go'aansato inuu halkaas tago.
Venice in Tareenadu Siena
Siena ma aha magaalada weyn oo keliya ee Tuscany. San Gimignano waa mid kale. Labada iyaga ka mid ah waa UNESCO goobaha dhaxal ahaan dunida, laakiin kaliya San Gimignano aad ka nixin kara in ay skyline laga sameeyey munaaradaha Dr Makumbe badan. run ahaantii Waxaa hortiisa ah si ay u arkaan iyo mid aan idin illoobi doona.
Dabcan, waxaad booqan kartaa magaalada via tareenka sida ay tahay habka ugu fudud oo ugu dhaqsiyaha badan in ay gaaraan goobta ka Venice. Waa maxay more, waxa kale oo aad heli doontaa si aad u aragto skyline kor ku xusan Dhuur ka raaxada ee casriga ah tareen Talyaani.
Venice in Tareenadu San Gimignano
Trieste waa caasimadda ah ee Friuli Venezia gobolka Giulia iyo beenta ee xuduudda la leh Slovenia. Waxay leedahay meel u gaar ah oo dhan ee Italy, waxaana uu qayb ka mid ah dalka muddo oo kali ah 70 sano. Sababo la xiriira this, Trieste waa isku darka gaar ah dhowr saamayn Yurub.
Si kastaba ha ahaatee, in isku darka waa waxa ka yeela mid gaar ah oo cajaa'ib ah rugeedka si ay booqasho. Waxaad ka gaari karin magaalada si fudud via tareen ka Venice. kortaan oo dhan waa mid aad u gaaban, laakiin qayb ka mid muhiim ah waa in ay mara xeebaha quruxda badan Talyaani. All of in si xaqiiqo ah waxa ay taasi iyadaa u wanaagsan, mid ka mid ah safarada maalinta ka Venice.
Venice in Tareenadu Trieste
Key geedaysan About Best Saffarada Day From Venice
All oo dhan, Venice been meel gaar ah. Waxaad ka heli si ay u safri doonta dalal badan oo xiiso leh inta badan Italy fudayd. Plus, isla goobta u oggolaanaysa in dhammaan safarada maalin ka Venice iyo qaar badan oo.
Haddii aad diyaar u yihiin in ay bilaabaan mid ka mid ah kuwan adventures, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waxaa la qaado caga aad ugu jeceshahay. Markaas oo dhan bidix waa waa in aad samayso waa tag saldhiga tareenka. Haddii aad qabto wax su'aalo ah oo dheeraad ah, si xor ah u soo xiriir Save A tareenka, iyo waxaan ku farxi doonaan inay caawiyaan.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “7 Best Saffarada Day From Venice In Italy” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-venice%2F%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
europetravel	GardaLake	Padua	trainjourney	travelflorence	travelitaly	Trieste	Verona